Cristiano Ronaldo waa laacibka ugu dakhliga badan leh adduunka, Yaa xiga yaase ka mid ah liiska 10-ka sare?? – Gool FM
(World) 08 Juunyo 2016. Goor dhow ayuu ku guuleystay koobka Champions League wuxuuna iminka Cristiano Ronaldo u dabaal degayaa inuu noqday laacibka ugu dakhliga badan adduunka ma ahan kubbada cagta oo kaliya.
Jariiradda ganacsiga ee ka soo baxda Mareykanka ee Forbes ayaa soo saartay liiska sanadlaha ee 100-ka laacib ee ugu dhakhliga badan adduunka waxaana liiska hogaaminaya Ronaldo oo sanadkii la soo dhaafay jeebka ku ritay adduun dhan 88 million oo doolar oo u dhiganta (60.4milyan oo bound).
Messi ayaa soo xirtay kaalinta labaad ee qiimeyntan wuxuuna helay sanadkii tagay 81.4-milyan oo doolar waxaana xusid mudan in Ronaldo iyo Messi ay qiimeyntii sanadka hore ka soo galeen kaalimaha saddexaad iyo afaraad.
Waa markii ugu horreysay tan iyo 2000 in laacibka Golfka ciyaara ee Tiger Woods uu u dhoco kaalinta 12-aad iyo sidoo kale in tobanka sare laga waayo feeryahanka Floyd Mayweather.
Forbes ayaa sheegtay in 100-ka laacib ee ugu dakhliga badan adduunka ay sanadkii tagay jeebka ku shubteen 3.15- billion doolar.
Boqolka ugu dhakhliga badan ciyaaraha adduunka ayaa ka kala yimid 23-dal oo kala duwan iyadoo kuwa ugu badan ay yihiin Mareykan 65-qofood.
10-ka sare ee liiskan waxaa xiddigaha ugu badan ku leh kuwa ciyaara ciyaaraha Basketball waana in kabadan ciyaaro kasta oo kale saddex ayuuna ku leeyahay Kevin Durant ($56.2m) shanaad ayuu ku jira iyo Kobe Bryant ($50m) oo galay 10-aad, waxaa meesha ka marnayn xiddiga ugu shidan Basketball ka sanadahan ee LeBron James oo saddexaad qiimeyntan ka soo galay.
Xiddigaha Tennis-ka ciyaara ee Roger Federer (67.8-milyan oo doolar) iyo Novak Djokovic (55.8 milyan oo doolar) ayaa ku kala jira kaalimaha afaraad iyo lixaad.
EEG LIISKA 10-ka sare:
"Waa fursad gaad," Dani Carvajal oo duqeeyey Jose Mourinho